अर्थ खबर Archives - Nepali in Australia
Category: अर्थ खबर
September 23, 2021 autherLeaveaComment on ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौं – बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार तोलामा ९ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ५ सय रुपैयाले घटेको हो । बुधबार प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ८९ हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । […]
असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि सोमबारदेखि नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । कोभिड-१९ बाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधरणका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट मात्रै नभएर बैंकहरुले आफैंले पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गर्ने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले वितरण […]
September 17, 2021 autherLeaveaComment on फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं – शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । बिहिबार तोलामा ७ सय रुपैयाले घटेको सूनको मूल्य आज तोलामा १४ सय रुपैयाले घटेको हो । बिहिबार प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ८९ हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको […]
भदौ २३ गते । आज बुधबार ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य ह्वात्तै घटेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ७ सय रुपैयाँ घटेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन ताेलामा ७ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार […]
August 27, 2021 EditorLeaveaComment on धितोपत्र बोर्डको नया नियमले , अब देखि आईपीओ पर्ने सम्भावना बढ्यो तर कसरि ? हेर्नुहोस
काठमाडौ । धितोपत्र बोर्डले अरूको नामबाट आईपीओ भर्ने कार्य बन्द गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ । जसले गर्दा आइपिओ पर्ने सम्भावना बढ्नेछ । शेयर लगानीकर्ताहरूको सहजताका लागि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अनलाइन माध्यमबाट केवाईसी अर्थात आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता गराउने प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरूले केवाईसी दर्ता गर्न विभिन्न बैंक तथा […]
August 25, 2021 EditorLeaveaComment on मोटर बाटो नभएको जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने
काठमाडौं । अब मोटर बाटो नभएको जग्गासमेत धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने भएको छ । यसरी लिइने ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ऋणको सीमा २० लाख रुपैयाँ तोकेको हो । जग्गा […]
August 20, 2021 autherLeaveaComment on आज फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य !
काठमाडौं-आज शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको हो । आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी, आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ९० […]
August 19, 2021 EditorLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ– नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासघंका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने भएको छ । यस दिन सुन ४०० रुपैयाँले घटेको हो । यस्तै तेजावी सुन प्रतितोल ९० हजार ३ सय रुपैयाँमा […]
फेरि सोच्नै न सकिने गरी यसरी बढ्यो सुनको मूल्य
August 18, 2021 autherLeaveaComment on फेरि सोच्नै न सकिने गरी यसरी बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार सुन तोलामा दुई सयले बढेर ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। तेजावी सुनको मूल्य ९० हजार ७०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।यस्तै, चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आज चाँदी तोलाको एक हजार २०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको […]
August 16, 2021 autherLeaveaComment on एक्कासि एकैदिनमा यसरी घट्यो सुन-चाँदीको मूल्य
नेपाली बजारमा सुनको मुल्य एक सयले घटेको छ।आइतबार तोलामा ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार एक सयले घटेर ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । आज चाँदी तोलाको एक हजार दुई सय रुपैयाँमा किचबेच भइरहेको छ।****** यो समाचार को […]